Rast Cloebebol Acetate powder (855-19-6) hplc =98% | AASraw
/ Products / Anabolics Steroids / Testosterone powder Series / Clostebol Acetate (Turinabol) powder
SKU: 855-19-6. Categories: Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
MUTSVENE unobatanidza uye unogadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika pakukura kweClostebol Acetate (Turinabol) powder (855-19-6), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Clostebol Acetate (Turinabol) powder video
Clostebol Acetate (Turinabol) powder Characters
Name: Clostebol Acetate (Turinabol) powder
Melt Point: 112-116 ° C
Color: Yakachena kana kuti yakachena chena cristalline powder
Clostebol Acetate (Turinabol) powder kushandiswa mune steroids cycle
Raw Turinabol powder Mazita
Clostebol Acetate (Turinabol) powder (CAS 855-19-6), ane zita re4-chlorotestosterone, uye ane mazita echirwere Tbol, Macrobin, Steranabol, Alfa-Trofodermin, Megagrisevit.
Turinabol (Chlorodehydromethyltestosterone, inozivikanwawo se'Tbol 'neOral Turinabol) chaizvoizvo iyo inoshandiswa fomu ya Dianabol (Methandrostenolone), iyo ichinyatsobatanidzwa chemakemikari e Dianabol neClostebol (4-chlorotestosterone). Nokudaro ichi ndicho chikonzero chaiwo maikemikari zita rinonzi 4-chlorodehydromethyltestosterone. Izvozvo zvinogadziriswa kumakemikari ayo anoita kuti zvive zvisina kuchena uye kuti ivewo nechechi yakanyanya uye androgenic, izvo zvingangodaro nei Turinabol yakatumidzwa se "Dianabol" munyoro.
Turinabol ine chikwata chakakosha che androgenic che6 uye chinonzi anabolic simba ye53, izvi zvinoita kuti zvive pedyo zvakakwana pakuenzanisa nemigumisiro nemigumisiro. Pamusana pezvakaderera zvakanyanya uye androgenic rating, acne, utsinye, kutsamwa kwakasimba uye kuwedzera kwesimba hazviwanzovi, asi kwete. Kuenzaniswa nemubereki wavo hormone Dianabol, iyo inobata vanabolic uye mizimba inoratidzika haisi kuona Oral Tbol senhengo yekuwana mujeri.
Turinabol inenge inenge hafu yeanbolic yokuyera kweTesttosterone, saka madhairi muhuwandu hwe40-60mg pazuva anorayirirwa senheyo. Turinabol dosages inogona kudarika 80-100mg pazuva, asi varimi vomuviri vanorondedzera migumisiro yemitambo inotanga kubuda, asi kubudirira kunoramba kuripo.
Nemhaka yekuparadzaniswa kwayo yakasiyana neye androgenic kune anabolic effects, iyo isisina simba vanabolic steroid kupfuura iyo mubereki wayo hormone Dianabol. Zvisinei, vimbiso neTbol ndeyokuti chero ipi zvayo inooneka musimba yekuvakwa, inozopa zvishoma nezvishoma nenzira ye androgenic uye pasina zvachose estrogenic zvinokonzerwa (nemhaka yekusagona kukonzerwa neEstrogen). Nokuda kwesimba rayo risina simba kudarika Dianabol, doses inotarisirwa kuunza zvinoitika kubva kuTbol inofungidzirwa kuti yakakwirira kwazvo (izvi zvichatsanangurwa munguva pfupi iri muchikamu cheTbol chechikamu chemufambiro).
Pasi pose, vatambi uye varimi vanogona kutarisira kugadzikana uye kwehutano hwakakosha huwandu hwemhando pasina pangozi yekubvisa chero kupi zvako, gyno, kana zvimwe zvinokonzerwa nesrogenic. Misa uye simba rinobudirira hazvizivikanwi kuti zvinoshamisa nekuda kwekushaikwa kwayo kwevanabolic simba, asi kugadzikana uye kwehutano hunobudirira huri kukura nguva dzose pane nguva inogona kutarisirwa. Inoshandiswawo seyakanaka yekucheka mujeri munguva dzekurasikirwa kwemafuta kana kusati kwatanga kugadzirisa nekuda kwekusakwanisa kushandura ku Estrogen. Turinabol anokwanisa kunyatsojekesa kune mamwe anabolic steroid kana ichimhanya (yakaiswa) neine vanabolic steroid nemhaka yekugona kwayo kusunga SHBG. Kubhadhara SHBG kunobvumira zvimwe zvevana analiclic steroid iyo yakaiswa pamwe chete kuti iwanikwe kuita basa ravo, isina kudzivirirwa neSBB, iyo imwe yekubatsira iyo inoratidza.
Warning on Raw Turinabol powder
Kushandisa kwenguva refu kunogona kukonzera sodium, kuchengetwa kwemvura, saka kuchengetedzwa kwe sodium kunokonzerwa nokuputika kwechirwere bogey. Chirwere chirwere, hypertension, edema, varwere vekenza yeprostate uye vakadzi vane pamuviri havafaniri kushandisa. Kushandiswa kwenguva refu kunogona kukonzera madzimai masculinity.
Rast Cloebebol Acetate powder Zvimwe mirayiridzo
Clostebol iAAS ine simba uye inogona kushandiswa sekusimudzira kushandiswa kwemishonga. Iko zvino yakarambidzwa neWorld Anti-Doping Agency. Oral Turinabol, kubatanidza makemikari evhastebol uye metandienone, yakashandiswa zvakanyanya muEast German chirongwa chedoping chinotsigirwa nehurumende.
Tobol inowanzobatanidzwa pamwe chete nemamwe anabolic steroid, izvi zvinokonzerwa neyo kuva munyoro wakanyanyisa uye kuderedza maitiro e testosterone chaiwo muvashandisi. Turinabol haisi iyo inonzi anabolic kana androgenic ye-steroid, naizvozvo kuwanda kwemajini kunowanikwa pamusoro peTbol. Iyi anabolic ine unyoro inoshandiswa panguva dzekucheka, mafuta ekurasikirwa nguva uye kusati kwasangana kwekuvaka muviri.
Turinabol maitiro anokwanisa kushandiswa kunongedza muromo chete uri pakati pe40-60mg pazuva kwevhiki ye 6-8. Izvi zvichapa kukurudzira kwakasimba musimba, tsvuku tsvina uye kubvumira musero we steroid kuchengetedza misi miviri kana mune kukanganiswa kwekoriori. Kuchengetedza mapuroteni kuputsika chimbo chaidiwa zvikuru kana kusvika ku-10% mafuta emuviri ndiyo chinangwa.
Zvimwe zvakanyanyisa zvakagadzirwa zveOral Turinabol zvinogona kureva mamwe maitiro akaita se; Testosterone inogona kushandiswa kwe synergistic effects. Nguva pfupi uye yakareba yakagadzirwa Testosterone magadzirira ingashandiswa. Testosterone Propionate pa 100mg injected zuva rimwe nerimwe neTurinabol 60mg zuva rimwe chete kwemavhiki e8 inzvimbo yakanakisisa yehutsika hwemaviri uye kudya kwezhizha.
Pakufamba kwenguva kwe Testosterone, somuenzaniso, kushandisa Testosterone Enanthate kwemavhiki e12, muromo unotaurirwa kwekutanga kwevhiki dze 4-6 apo Testtosterone "inokwidza". Iri izwi rinoshandiswa kuti kana mazimbe epa plasma akachengeteka ari pamatambudziko avo uye anowanikwa mumasumbu akawanda uye mapuroteni mazana ari pane akakwirira.
Turinabol inogona kubudisa masimba ane simba uye anogara kwenguva refu. Saka mutambi anorishandisa haafaniri kutarisira kukurumidza kuwana simba, musimba uye kurema. I "long term" anabolic steroid.
Kutenda kudhesa kwayo yakaderera, yakakurumidza kugadziriswa nemuviri, iyo inobvisawo metabolites kuburikidza nehuta. Maitiro ekurwisa-doping kazhinji haaone Turinabol kana mutambi wacho achirega kurapwa mumazuva 5 vasati vapikisana.
Turinabol haitungamiri kumvura yekuchengetedza mvura zvichienderana nekuyera kwemvura nemaminerari. Izvo zvishoma uye androgenic kupfuura dzimwe vanabolics se Dianabol. Izvi zvinoitawo kuti vakadzi vashandise zviri nyore, kunyange zvazvo vachifanira kungwarira kuti vasapfuure zvakatarwa kurapwa kwenguva refu.
Pakupedzisira, chlorine inoshandiswa inodzivisa kutaurirana nearomatase. Nokudaro kune ngozi shoma ye gynecomastia kana DHT kutendeuka.
Pakugumisa, Turinabol ndiyo steroid yakaisvonaka yekugadzirira muviri wako "zvakasikwa". Kukwanisa kwaro kuvaka misimba yakazara kunoreva kuti vatambi vakawanda vanoshandisawo panguva yekuzorora (nguva isina-nguva). Izvi zvinovabvumira kugadzirira uye kusimbisa musimba pasina kuwana hukuru.
Rast Cloebebol Acetate powder (CAS 855-19-6)
Hupenyu Hupenyu: 16 maawa
Nguva yekucherechedza: 11 - 12 mwedzi
Rast Cloebebol Acetate powder Marketing
Nzira yekutenga Clostebol Acetate powder (CAS 855-19-6): kutenga Turinabol powder kubva kuAASRAW
KUNYANYA kunopa hutano 99% Clostebol Acetate poda yakasvibiswa kuvaiti vemuviri kana pasi pevhu.
Raw Clostebol Acetate (Turinabol) powder Recipes:
Migumisiro yeKlostebol Acetate powder: Sei vanhu vachida Tbol?
Rated 4.33 kubva 5
Madzimai eHormoni (21)
PCT Zvinodhaka (6)
Ko MK-677 (Ibutamoren) inoshanda zvakanaka Kune Musha Kuvaka? Ongororo Yekutsamwa [2019 NEW]
Copyright © 2019 aasraw Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Yakagadzirwa na www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com